के हुन्छ महिनावारीकाे बेला याैन सम्पर्क गर्दा ? - ज्ञानविज्ञान
यो व्यक्तिगत इच्छामा पनि भर पर्ने कुरा हो । कसैलाई महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्ने मन हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन ।
महिनावारीको बेलामा सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? गरेमा के हुन्छ ?
महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कन्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन । महिनावारी भएका बेला यौन सम्पर्क गर्न नहुने भन्ने छैन ।
हाम्रो स्वास्थको सहयोगम ।
Topics #महिनावारी #याैन सम्पर्क
Don't Miss it खानाबाटै नियन्त्रण गर्ने उपाय कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइड
Up Next यस्ता छन् केहि तथ्य पोलियो सम्बन्धी